Wikimedia: အကြောင်း - Wikimedia Foundation Governance Wiki
၃Accounts on this wiki
၄Administrators on this wiki
This page isatranslated version of the page Wikimedia:About and the translation is 26% complete.
Wikimedia Foundation သည် အများသူငှာ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို အများသူငှာရရှိနိုင်သည့် Wikimedia Foundation Governance Wiki မှ ကြိုဆိုပါသည်။.
Administrators ယခင်က ဖောင်ဒေးရှင်းဝန်ထမ်းများနှင့် ဖောင်ဒေးရှင်းမဟုတ်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း အများအပြား ပါဝင်ခဲ့သည်။ မေလ 2013 မှစ၍ ဖောင်ဒေးရှင်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ဝန်ထမ်းများသာလျှင် ဤဆိုက်တွင် စီမံခန့်ခွဲသူများဖြစ်နိုင်သည် (အချို့သောကိစ္စများတွင် ဖောင်ဒေးရှင်းမဟုတ်သောဝန်ထမ်းများအတွက် ယာယီစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း)။
Stewards နှင့် global sysops တို့သည် ဤဝီကီတွင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Retrieved from "https://foundation.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia:About/my&oldid=138496"
This page was last edited on5June 2022, at 11:55.